Magweta eInternational Appeal muNetherlands - Law & More
UNOZVIPA HERE NEVERDICT YEKUTENDA? KUSVIKANA LAW & MORE!
Zvakajairika kuti mumwe kana mapato maviri haabvumirane nemutongo kwavari. Iwe unopokana here nemutongo wedare? Ipapo pane imwe sarudzo yekukwirira mutongo uyu kudare rekukwirira. Nekudaro, iyi sarudzo haishande pazvinhu zveveruzhinji zvine mari yemari isingasviki EUR 1,750. Iwe unobva wabvumirana nemutongo wedare here? Ipapo iwe unogona kuramba uchibatanidzwa mune zvinoitika padare. Mushure mezvose, mumwe wako waanogona anogona zvakare kusarudza kukwidza. Iko mukana wekukwikwidza unodzorwa muChinyorwa 7 cheDutch Civil Code yeProcessure. Izvi zvinogona kubva pachimiro chekubata nyaya yacho muzviitiko zviviri: pekutanga kazhinji mudare uyezve mudare rekukwirira. Zvinotendwa kuti kubata nyaya iyi muzviitiko zviviri kunowedzera kunaka kweruramisiro, pamwe nekuvimba kwevagari mukutonga kweruramisiro. Chikumbiro chine mabasa maviri akakosha: • Kudzora basa. Pakukwidza, kumbira dare kuti riongorore nyaya yako zvakare uye zvizere. Naizvozvo dare rinotarisa kana mutongi pakutanga akanyatso simbisa chokwadi, akashandisa mutemo nemazvo uye kana akatonga nemazvo. Kana zvisiri, mutongo wekutanga mutongi uchapidigurwa nedare. • Dzorera mukana. Zvinogoneka kuti iwe wakasarudza zvisiri pamutemo hwaro hwepamutemo pakutanga, hauna kugadzira chirevo chako zvakakwana kana kupa humbowo hushoma kune chirevo chako. Nheyo yekugara kuzere saka inoshanda mudare rekukwirira. Kwete chete kuti chokwadi chese chinogona kuunzwa kudare zvakare kuti chiongororwe, asi iwe sebato rekukwirira uchavawo nemukana wekugadzirisa zvikanganiso zvawakaita pakutanga. Iko kune zvakare mukana pane kukwidza kuwedzera chikumbiro chako.
Magweta edu emakambani akagadzirira iwe
Makambani ese akasarudzika. Naizvozvo, iwe uchagamuchira zano repamutemo iro rakanangana zvakananga nekambani yako
Mumwe munhu haasi kusangana nezvibvumirano zvavo here? Tinogona kutumira zviyeuchidzo uye kuverengera
Iyo yakanaka yakakodzera Kuongororwa kwemaonero edhiri zvinopa chokwadi. Isu tinokubatsira
Iwe ungade kuita mativi akapatsanurwa evako vanogovana navo mukuwedzera kune ako zvinyorwa zvehukama? Bvunza isu rubatsiro pamutemo
"Ini ndaida kuva negweta rinogara rakagadzirira ini, kunyangwe mukupera kwevhiki"
Nguva yekukwidza nyaya Kana iwe ukasarudza nzira yekukwidza nyaya kudare, unofanirwa kukwiridzira mukati menguva yakati. Kureba kwenguva iyoyo kunoenderana nerudzi rwekesi. Kana mutongo uyu uine chekuita nedare redzimhosva, une mwedzi mitatu kubva pazuva remutongo wekukwidza nyaya. Wakafanirwa kubata neepfupiso maitiro pakutanga? Panguva iyoyo, inguva yevhiki ina chete inonyorera kukwidzwa kudare. Dare rematsotsi rakafunga nekutonga nyaya yako here? Pakadai, une mavhiki maviri chete mushure mekufunga kukwidza kudare. Sezvo zvirevo zvekukwirira zvichishanda zviri pamutemo chokwadi, idzi nguva dzakatarwa dzinofanirawo kutevedzwa zvakanyanya. Iyo yekukwirira izwi saka iri yakaoma nguva yekupedzisira. Hapana kukwirwa kuchafambiswa mukati menguva ino? Ipapo iwe unononoka uye nekudaro haugamuchire. Izvo chete mune zvakasarudzika zviitiko apo kukwidzwa kunogona kumisikidzwa mushure mekupera kwegore rapera rekukwirira. Izvi zvinogona kunge zviri izvo, semuenzaniso, kana chikonzero chekukwirwa kwekupedzisira iri mhosva yemutongi iye pachake, nekuti iye akatumira odha kumapati akanonoka.
Maitiro Muri muchimiro chechikumbiro, musimboti wechigadziro ndechekuti zvido zvine chekuita nechokutanga chiitiko zvinoshandawo kune yekukwidza nyaya. Chikumbiro saka chakatangwa nespenieni nenzira imwechete uye nezvinodiwa zvakafanana neiya yekutanga. Nekudaro, hazvisati zvichidikanwa kuti utaure zvikonzero zvekukwirira. Idzi nzvimbo dzinongofanirwa kuunzwa muchirevo chekunyunyuta uko kunotevedzwa masamanisi. Zvikonzero zvekukwirira zvese zvikonzero izvo uyo anomhan'arira anofanira kuisa pamberi kuti nharo yakakwikwidzwa yedare mukutanga inofanirwa kuiswa parutivi. Izvo zvikamu zvetonga izvo zvisina zvikonzero zvakaiswa mberi, zvicharamba zviri musimba uye hazvichazotaurwazve pamusoro pekukwirira. Nenzira iyi, nharo pamusoro pekukwirira uye nokudaro battery yepamutemo ine mashoma. Naizvozvo zvakakosha kusimudza chikonzero chekupokana kuchisungo chakapihwa pakutanga. Izvo zvakakosha kuti uzive mune ino mamiriro kuti iyo inonzi general pasi, iyo ine chinangwa chekuunza iyo gakava kuzere kwechirevo, haigoni uye haibudirire. Mune mamwe mazwi: chikumbiro chekukwirira chinofanira kunge chine chirevo chekongiri kuitira kuti zvive pachena kune mumwe mubato mukudzivirira izvo izvo zvinopesana chaizvo. Chirevo chekunyunyuta chinotevera chirevo chekudzivirira. Kana iri yayo, anopomerwa mukwikwidzi anogona zvakare kuisa zvikonzero pamberi peanopokana mutongo opindura kuchikumbiro chemhan'ari. Chirevo chekunyunyuta uye chirevo chekudzivirira chinowanzogumisa kuchinjana kwenzvimbo pakukwirira. Mushure mekunge magwaro akanyorwa atsinhaniswa, hazvibvumidzwe kuisa mberi nzvimbo nyowani, kunyangwe kuitira kuti ukure. Izvo zvinotsanangurwa kuti mutongi haakwanise kutarisisa kune zvikonzero zvekukwirira zvakaiswa pamberi mushure mekutaura kwekukwirira kana kudzivirira. Izvo zvakafanana zvinoshanda pakuwedzera kwekubvunzwa. Nekudaro, nenzira yekusarongeka, pasi richiri kuenderana nenguva inotevera kana mumwe wacho akapa mvumo, chikumbiro chinomuka kubva mukupokana kana mamiriro ezvinhu mutsva amuka mushure mekunge magwaro akanyorwa aiswa. Sekutanga, denderedzwa rakanyorwa muchiitiko chekutanga rinogara richiteverwa nekunzwa pamberi pedare. Pane chakasarudzika kune iyi nhungamiro mukukwirira: kutongwa pamberi pedare kungasarudzika saka hazvizivikanwe. Mhosva zhinji saka dzinowanzogadziriswa mukunyorwa nedare. Nekudaro, mapato ese ari maviri anogona kukumbira dare kuti rinzwe nyaya yavo. Kana bato richida kunzwiwa pamberi pedare redzimhosva, dare rinofanira kuchibvumira, kunze kwekunge paine mamiriro ezvinhu akakosha. Kusvika panguva ino, kesi-mutemo kurudyi rwekukumbira unoramba uripo. Nhanho yekupedzisira mumatare epamutemo mukukwirira mutongo. Mumutongo uyu, dare rekukwirira richaratidza kuti mutongo wakapihwa wedare wanga wakanaka. Mukuita, zvinogona kutora kusvika pamwedzi mitanhatu kana kupfuura kuti mapato atarisana nemutongo wekupedzisira wedare rekukwirira. Kana zvikonzero zvemubatiri zvikasimbiswa, dare rinofanira kuisa parutivi mutongo wakakwikwidzwa uye rinogadzirisa nyaya yacho pachayo.
Kukwidza nyaya mudare redzimhosva Unotenderana here nedare redzimhosva? Ipapo iwe unogona zvakare kukwidza. Nekudaro, kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchiraira nehutongi mutemo. Iko kunowanzo kuve nenguva yemavhiki matanhatu kubva panguva iyo mutongo wedare redzimhosva uchiziviswa, mukati mawo iwe waunogona kukwidza nyaya. Iwe zvakare uchafanirwa kubata nezvimwe zviitiko zvaunogona kutendeukira kwazviri mune mamiriro ekukwirira. Dare ripi raunofanirwa kuenda rinoenderana nerudzi rwemhosva: • Kuchengetedzwa kwevanhu uye mutemo wevashandi vehurumende. Mhosva dzekuchengetedzwa kwevanhu pamwe nemutemo wevashandi vehurumende dzinoitwa mukukwidzwa neCentral Board of Appeal (CRvB). • Mutemo wezvehupfumi nezvehutongi. Zvinhu zviri muchirevo che, pakati pezvimwe, Mutemo weKukwikwidza, Mutemo wePosvo, Commodities Act uye Mutemo weTerecommunication Mutemo zvinotarisirwa kukwidza neBhodi reKutsvaga Bhizinesi (CBb). Dzimwe nyaya, kusanganisira nyaya dzekuenda kune dzimwe nyika, dzinoitwa mukukwirwa neOr Administrative Jurisdiction Division yeKanzuru yeHurumende (ABRvS).
Mushure mekukwikwidza Kazhinji, mapato anoteedzera mutongo wedare rekukwirira uye nyaya yavo saka inogadziriswa pakukwirira. Nekudaro, haubvumirani nemutongo wedare mukukwirira? Ikozve pane sarudzo yekuisa cassation kuDutch Supreme Court kusvika kumwedzi mitatu mushure mekutonga kwedare rekukwirira. Iyi sarudzo haishande kune sarudzo dzeABRvS, CRvB uye CBb. Mushure mezvose, zvirevo zvemiviri iyi zvine kutonga kwekupedzisira. Saka hazvigoneke kupokana kutonga uku. Kana mukana wecassation uripo, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hapana nzvimbo yechokwadi yekuongorora kwekupokana. Zvikonzero zvecassation zvakare zvine mashoma. Mushure mezvose, cassation inogona kungoiswa chete mukati sezvo matare epasi asina kunyatso shandisa mutemo. Iyo maitiro anogona kutora makore uye anosanganisira mitengo yakakwira. Izvo zvakakosha kuti ubvise zvese kubva munzira yekukwirira. Law & More inofara kukubatsira neizvi. Mushure mezvose, kukwikwidza maitiro akaoma mune chero kutonga, kazhinji kunosanganisira zvido zvikuru. Law & More magweta inyanzvi mune dzese mhosva, dzekutonga pamwe nemutemo wehurumende uye vanofara kukubatsira mukukwidza nyaya. Une imwe mibvunzo here? Ndokumbirawo mubate Law & More.